Maalinta: Juun 11, 2019
Halkalı Heshiiska Wadykule Tareenka Saxiixay
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Halkalı- Awoodda qaadista dhererka Wadykule Tareenka, Çerkezköy- Marka la sheego in ay si weyn u kordhin doonto dhismaha xarumaha Kapikule, 275 million oo deeq ah oo ka timid Midowga Yurub (EU) ayaa loo isticmaali doonaa dhismaha. [More ...]
Diiwangelinta Gaadiidka Gaadiidka ee Üsküdar-Çekmekoy Line
Üsküdar-Çekmekoy Metro Line iyo Topkapı-Mescid-i Selam Tram Line ayaa jabiyay rikoodh cusub oo ku saabsan tirada rakaabka maalinlaha ah! Maalin kasta, siday rakaab ku 2 million Metro Istanbul, Turkey maalinta kowaad ee 5 2019 June [More ...]
KARDEMİR oo bilaw u ah saddexda maal gashiga saddexda jibbaaran
Iyada oo la tiigsanayo awoodda ay u leedahay 3,5 million tan, KARDEMİR wuxuu bilaabay saddexda maal gashiga isku mar. KARDEMİR's 4. Foostada No.2 ayaa maanta la joojiyay maalgashiga. 2 dukaanka birta. Awoodda xaddiga 120, [More ...]
Saxiixyada Tikidhada Tiknoolajiyada Sare ee Yurub: M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Halkalı- Awoodda qaadista dhererka Wadykule Tareenka, Çerkezköy- In la sheego in qaybta Kapıkule ay si wayn u kordhin doonto dhismaha, [More ...]
Waan ognahay ... Maalgashiga weyn ee miisaaniyadda wuxuu yimaadaa ajendaha marka magaaladu ay rabto iyo marka baahidu ay noqoto mid muuqata. Si kastaba ha noqotee, ◆ Waxaa lagu doodayaa sida aynu ugu guuleysanayno waxaanu nahay magaalo ahaan mulkiilaha, laakiin Bursa waxay doonaysay wadiiqo wakhti dheer ah waxayna sugeysaa tareenka xawaare sare. Halkan kent [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaala xeebeedka Malatya ee harada Karakara Dam Lake, oo u adeegta inta u dhaxaysa Battalgazi iyo degmada Baskil waxay diyaarisay adeegyadii doonyaha. Waxaa abaabulay inta u dhaxeysa degmada Battalgazi ee Malatya iyo degmada Baskil ee Elazığ [More ...]
Meelaha Badbaadinta ee Badda Madow waxay ku xiran yihiin Mashruuca Road Road
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Güler, marka loo eego baaxadda Mashruuca N Green Road X ee 2013 kun 2 km, oo shaqooyinkiisu ay ka bilaabeen 600 [More ...]
Tareenka maalinlaha ah ee 3 ee Sincan ilaa Polatli wuxuu ka baxaa qaybta magaalada. Dhammaan tareenada ay soo maraan saldhigyada Sincan Polatli waa tareenada nooca DMU ee TCDD Railways. Tareenadu waa nooca Pulman oo nooca kuraasta leh. [More ...]
Dowladda Hoose ee Antalya waxay dayactir iyo howlo dayactir ku sameyneysaa wadooyinka kooxda ee xaafadaha Küçükköy, Taşkesiği iyo Söb ofce ee degmada Korkuteli, kuwaas oo u xaalufiyay roobka da’ay awgeed. Dawlada hoose ee magaalada, wadooyin cusub iyo laamiyada ayaa shaqeeya [More ...]
Fardo waxaa loo kaxeeyay xero-xayawaanka. Kadib markii dawlada hoose ee magaalada Antalya ay joojisay howlihii phaeton ee Antalya ilaa bishii Juun 10, fardihii ayaa loo keenay meeraha cusub ee Antalya. Duqa Magaalada Antalya Metropolitan Munhittin Böcek [More ...]
Doorashada Rakaabka 'Choice in Bayram
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara, 7 / 24 waxay kujirtay waajibaad si ay muwaadiniinta caasimada uqabtaan inay ku cunaan Iiddii Ramadaanka nabada iyo xasiloonida. Iskuxirka Degmooyinka Magaalada Ankara ee Magaalo Weyn waa meesha ugu wanaagsan ee ay muwaadiniintu ku safri karaan ciidaha fasaxa dheer darteed. [More ...]
TransportationPark waxay sii wadaa barashada intaad soo gasho
Mid ka mid ah xubnaha ka tirsan Dawlada Hoose ee Kobanheere, TransportPark Inc. waxay sii wadaan inay sameeyaan ururrada adeegga u adeega muwaadiniinta. In kasta oo 2 ay booqashooyin kala duwan ay u sameynayaan dugsiyada ay u diraan Agaasimaha Guud ee gaadiidka, Gaadiidka Gaadiidka ayaa sidoo kale laga heli karaa ardayda martida ah. [More ...]
Shilkii tareenka ee dhacay sanadkii la soo dhaafay ee Tekirdaag, madaxda sare ma lagu darin baaritaanka. Tani waxay sababtay dareen-celin. Qoysaska ku dhintay qoyskooda shilka ayaa waxay qaadi doonaan go'aanka aan xukunka loo hayn Maxkamadda Dastuuriga ah. 8 ee kuyaala Corlu [More ...]